आईतबार मेलबर्नमा क्रिकेट र फुटबल प्रतियोगिताको फाईनल भिडन्त ! « MNTVONLINE.COM
आईतबार मेलबर्नमा क्रिकेट र फुटबल प्रतियोगिताको फाईनल भिडन्त !
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सञ्चालित दुई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताको फाईनल प्रतिस्पर्धा शनिबार ५ जनवरीका दिन हुने भएको छ । विगत एक महिनादेखि सञ्चालित बीएमडब्लु टी २० कप २०१९ को फाईनल खेल आईतबार स्थानीय प्रेस्टनस्थित टीडब्लू ब्लेक पार्कमा हुने भएको छ । उपाधिका लागि रोयल राईनोज क्रिकेट क्लब र सगरमाथा क्रिकेट क्लब आमने सामने छन् ।
अर्कोतर्फ गोर्खा नेप्लीज कम्युनिटी भिक्टोरियाले विगत १८ वर्षदेखि आयोजना गर्दै आएको फुटबल प्रतियोगिताको फाईनल पनि आईतबार नै हुन लागेको छ । यस पटक फाईनल भिडन्तमा युनाईटेड फुटबल क्लब र दि हिमालयन टाईगर्स आमने सामने भएका छन् । बन्डुराको आरएमआईटी स्पोर्टस सेन्टरमा दिउँसो साँढे १२ बजेदेखि खेल हुनेछ । थप जानकारी यो पोष्टरमा
युरोपा लिग आजबाट सञ्चालन हुने !
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण लामो समयसम्म रोकिएको युरोपा लिग आजबाट सञ्चालन हुने भएको छ ।
आईपीएल १९ सेप्टेम्बरबाट यूएईमा हुने !
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) आगामी १९ सेप्टेम्बरबाट यूएईमा हुने तय भएको छ । संयुक्त अरब